पहिलो डेटमै युवतीलाई आकर्षित पार्ने ६ सुत्र ! – Sagarmatha Online News Portal
पहिलो डेटमै युवतीलाई आकर्षित पार्ने ६ सुत्र !
काठमाडौं । तपाई कुनै युवा वा युवतीसँग पहिलो पटक डेटमा जाँदै हुनुहुन्छ ? उनीसँगको सम्बन्ध सुमधुर र दिगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसका केही उपायहरु छन् । यी उपायहरु जसले तपाइलाई मद्दत गर्न सक्छ । हेरौं यी महत्वपूर्ण ६ वटा सुत्र ।
पहिला आफू पुग्ने : पहिलो डेटका लागि तोकेको समयभन्दा केही अगाडि नै पुग्नुस् । सकेसम्म युवती आइपुग्नुभन्दा अगाडि तपाई पुग्नुस । त्यसको प्रभाव सकारात्मक पर्छ । कुनै रेष्टुरेन्ट या क्याफेमा पहिलोपटक भेट्दै हुनुहुन्छ, भने युवती आउँदा ढोका खोलिदिनुस् । उनी बस्ने स्थानको कुर्सी मिलाइदिनुस्, अनि उनी बसिसकेपछि मात्र आफू बस्नुस् ।
फूल : भेटमा अन्य प्रकारका उपहारभन्दा फूल नै प्रभावकारी हुन्छ । वास्नादार फूलले तपाईंको सम्बन्धलाई पनि वास्नादार बनाउन सघाउन सक्छ ।
मोबाइल साइलेन्ट : युवती आइपुग्नु अगाडि नै मोबाइल साइलेन्ट मुडमा राखिदिनुस् । यसले पहिलो भेटको कुराकानीमा केही अवरोध हुन्न । अनिवार्य कल आयो भने उनलाई सोधेर कुरा गर्नुस् तर सकेसम्म छोटो गर्नुस् ।
न भीडभाड न सुनसान : पहिलो डेटका लागि स्थान चयन गर्दा सुनसान स्थान नछान्नुस । सकेसम्म व्यक्तिहरु आवत-जावत भइरहने स्थानमा जानु राम्रो हो । सकेसम्म धेरै भीडभाड हुने स्थान पनि राम्रो मानिन्न ।
मदिरातिर ध्यान नदिनु : बेलुकाको समय पहिलो डेटको समय जुरेको छ, भने पनि मदिरातिर ध्यान नदिनु । आफू पनि नपिउनु र युवतीलाई पनि अफर नगर्नु बुद्धिमानी हो । र आवस्यकभन्दा बाहिर नजानुहोस् : यदि तपाई पहिलो डेटिङमा जानुभएको छ, भने विगतका कुरा नगर्नुहोस । आफ्नो बारेमा बताउन जति आवश्यक हो त्यति मात्र बताउनुहोस् । उसको पनि विगतमा फर्किने कोशिस नगर्नुहोस् नयाँ ढंगले अघि बढ्नुहोस् ।
विश्वका चर्चित आठ अनौठा यौनकाण्ड !
तपाईको सौन्दर्यतालाई यसरी कायम राख्नुहोस्
नायिका राउतको चिन्ता : ‘भारतीय साथीहरुसँग कसरी फेस गर्नु ?’